DF oo shaacisay in is-bedel lagu sameeyey bandowga saaran magaalada Muqdisho | Xaysimo
Home War DF oo shaacisay in is-bedel lagu sameeyey bandowga saaran magaalada Muqdisho
DF oo shaacisay in is-bedel lagu sameeyey bandowga saaran magaalada Muqdisho
Taliyaha Ciidanka Booliiska Soomaaliyeed General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa sheegay in dib loo beddelay saacadda uu billaabanayo bandowga Muqdisho, oo laga dhigay 8-da habeennimo.
Bandowga oo markii horeba ahaa 8-da habeenimo ayaa laga dhigay 7-da kadib bilowga bisha Ramadan, taasi oo horseeday in shacab badan ay ka dhiidhiyaan, ayada oo maanta Muqdisho ay ka dhaceen dibad-baxyo rabshado wata.
Xijaar ayaa dhanka kale ku celiyey “in aan la qaban karin dadka hal halka iyo labo labadda ugu lugeynayo gudaha magaalada, inta lagu guda jiro waqtiga Bandowga.”
Taliye Xijaar ayaa sheegay in amarka lagu beddelay saacadaha bandowga uu ka yimid madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, oo maanta sawiradiisa lagu gubay Muqdisho, kadib carro ka dhalatay laba qof oo shacab ah oo askari uu xalay ku dilay Muqdisho.
Magaalada Muqdisho ayaa waxaa maanta ka dhacay dibad-baxyo rabshado wata, ayada oo carrada shacabka ay u muuqatayinay ku wajahan tahay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, kaasi oo sawiradiisa lagu gubay magaalada.
Dadkaan careysan ayaa sidoo kale ku dhawaaqayey erayo ka dhan ah madaxweynaha oo ay ka mid ahaayeen “Farmaajo ha dhaco, guba Farmaajo” iyo kuwa kale.
Allaha u naxariistee labada marxuum ee la dilay, ee dhaliyey kacdoonka shacabka Muqdisho, ee maanta ayaa kala ahaa. 1- Marxuumad Madiino Cabdullaahi iyo Xasan Cali Cadaawe oo labaduba deganaa degmada Boondheere.
Puntland oo goaanno ka soo saartay xakamaynta sicir-bararka
Soomaaliya oo Mareykanka kala hadleysa faragelinta Kenya, QM dacwad u...
Janaraal Itoobiyaan ah oo loo magacaabay taliye xigeenka ciidanka AMISOM
Kenya oo ka hadashay in magaalada Mandhera 50% ay Al-Shabaab maamulaan
Dowladda UK oo shaacisay tirada askarta ay Soomaaliya u tababartay
Wasiirka arrimaha dibedda oo weerar culus ku qaaday Puntland iyo Jubaland
Cali Rooba: In ka badan 50% jidadka Mandera waxaa maamulo Al-Shabaab